Rose of Sharon: ကျောင်းတွေပိတ်တော့မည်
Posted by rose of sharon at 8:00 PM
အပြုံးပန်း July 2, 2009 at 9:40 PM
Shinlay July 3, 2009 at 12:11 AM
Rose ရေ.. ကျမမှာတော့ ကလေးမရှိပေမဲ့
မိခင်တယောက်ရဲ့မေတ္တာကိုတော့ အမြဲလေးစားလျှက်ပါ။
Hello to them....
Thanks for your Info about Viet. Soup.
sonata-cantata July 3, 2009 at 7:18 AM
ဒီမှာတော့ ဒီအပတ် Monday ကမှ ကျောင်းပြန်ဖွင့်သွားတာလေ...(June တလလုံးလုံးလိုလို ကျောင်းပိတ်ပြီး)...သူတို့လေးတွေ အိမ်မှာရှိနေတော့ အစားအစာလည်း ကြိုက်တာ လုပ်ကျွေးလို့ရတယ်...သူတို့ ပြောနေဆိုနေတာလေးတွေလည်း နားထောင်ပြီး သူတို့ အခြေအနေကို အနီးကပ် အကဲခတ်လို့ရတယ်...
မိသားစုအားလုံး ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ
rose of sharon July 3, 2009 at 9:43 AM
မီးမီးချစ် July 3, 2009 at 2:38 PM
ဒီလို လိုက်ဖြည့်စည်းပေး မယ့်အမေ ရှိတာ
ကလေးတွေ ကံကောင်း တာပေါ့...
မီးချစ် လဲ ယောက်ကျား သာ ယူပြီးတာ အမေ က လိုက်လုပ်ပေးနေရတုန်း.. ဟီးး..
လာလည် ရင် ကလေးတွေ ပါ ခေါ်ခဲ့ ပါ.. မီးချစ်က ကလေး မထိန်းတက် ပေမယ်... ငိုအောင် တော့ စတက် ပါတယ်..း))
rose of sharon July 3, 2009 at 3:13 PM
khin oo may July 5, 2009 at 8:47 PM
rose of sharon July 6, 2009 at 9:12 AM
PAUK July 6, 2009 at 11:45 PM
ကျနော်တို့အိမ်က ချန်းတို့ကတော့ ဇူလိုင် ၁ ရက်နေ့က
စပိတ်ပါတယ်..၂လတိတိ ပိတ်တော့ ..ကျူရှင်ပဲထားထားရတယ်..
ဒီက ကျူရှင်တွေကလဲ တိုက်ခန်းသေးသေးမှာဆိုတော့.
အခုတော့ သူ့အတွက် တစ်မျိုးကြံရွယ်ထားပါတယ်..
rose of sharon July 7, 2009 at 9:03 AM
Pauk,လာလည်သွားတာကျေးဇူးပါ... မိဘတိုင်းကတော့ကိုယ့်သားသမီးအတွက်အကောင်းဆုံးစဉ်းစားပေးကြ တာပါဘဲ...မိဘရဲ့မေတ္တာရိပ်အောက်မှာ ချန်းလေးပျော်ရွှင်နေမှာပါ...